Aasaase - Somalione
Yaanu Nahay Aasaase
Maxamad Cabdirisaaq waa aasaasaha ahna agaasimaha Somali One. Intuusan aasaasin Somali One ka hor, wuxuu soo noqday agaasimaha ha’yadda National Democratic Institute for Somalia (NDI)intii u dhaxeysay 2010-2014. Maxamed wuxuu si hagar la,aan ah uga soo shaqeeyey hormarinta nabada iyo xasilloonda soomaliya illaa 2007dii.
Intuusan NDI kusoo biirin ka hor, Maxamed wuxuu ahaa la taliyaha xagga siyaasada u qaabilsanaa ergayga khaaska ah ee qaramada midoobay u fadhiyay xafiiska siyaasada ee Soomaaliya (UNPOS).
2007 -2008dii Maxamad Cabdirisaaq wuxuu la taliye iyo hawlwadeen sare u soo noqday madaxweynihii Soomaliya. Wuxuu kaalin firfircoon ka soo qaatay geedi socodkii nabada iyo dib u heshiisiintii ka dhacay dalka Jabuuti halkaasoo heshiis lagu kala saxiixday bishii agoosto 2008. Illaa iyo waqtigaas, Maxamed wuxuu ku hawlanaa dadaalada caalamiga ah ee dalka loogu dhisayay dawlad laguna horminayay amniga iyo nabada soomaaliya. Wuxuu Maxamed Cabdirisaaq muujiyay karti hoggaannimo intii uu ku dhexjiray fududeynta wadahadalka iyo wadaxaajoodka guddiga isku dhafka ah ee amniga iyo guddiga heerka sare ee hormarinta nabada iyo amniga soomaaliya.
Dadka soomaaliyeed iyo diblomaasiyiinta bulshada caalamka ee ka hawlgala Soomaaliya waxay si tixgelinteeda leh Maxamad ugu qadariyaan kartidiisa hoggaamineed iyo calaaqaadka uu la leeyahay siyaasiyiinta soomaaliyeed, hoggamiyayaasha gobolka iyo xubnaha ka tirsan mucaaradka ee ku sugan dalka gudahiisa iyo dibediisaba.
Kahor Intuusan la shaqeynin dawladii kumeel gaarka aheyd iyo UNPOS, Maxamad Cabdirisaaq wuxuu ka soo shaqeeyey shirkadaha khaaska loo leeyahay ee dalkaa mareykanka iyo hay’ado caalami ah oo ay kamid yihiin UNDP Somalia iyo Bangiga Aduunka.
Maxamed Cabdirisaaq wuxuu ka qalin jebiyay jaamacadda N.W.F.P ee ku taalla dalka Pakistan halkasoo uu ka soo qaatay shahaadada culuunta beeraha. Sidoo kale wuxuu Maxamad shahaadada master-ka ee culuunta xiriirka caalamiga ah ka haystaa jaamacada Johns Hopkins laanteeda dugsiga daraaseynta caalamiga.